Ɔyɛ Wɔn a Wɔwɔ Gyidi Katuafo (Hebrifo 11:6) | Bɛn Onyankopɔn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Sɛ Yehowa asomfo bɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔbɛyɛ n’apɛde a, n’ani sɔ anaa? Ebinom bɛka sɛ dabi efisɛ wɔka sɛ Onyankopɔn nnwen yɛn ho. Nanso sɛ wɔka saa a, na wɔresɛe Onyankopɔn din pɔtɔɔ. N’Asɛm Bible ma yehu asɛm no mu nokware. Ɛma yɛn awerɛhyem sɛ wɔn a wɔde gyidi som Yehowa no, n’ani sɔ wɔn. Yɛnhwɛ ɔsomafo Paulo asɛm a ɛwɔ Hebrifo 11:6 no.
Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛasɔ Yehowa ani? Paulo kyerɛwee sɛ: “Gyidi nni hɔ a, obi ntumi nsɔ Onyankopɔn ani.” Hyɛ no nsow sɛ Paulo anka sɛ gyidi nni hɔ a ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛsɔ Onyankopɔn ani. Nea ɔkae ne sɛ gyidi nni hɔ a, obi ntumi nsɔ Onyankopɔn ani. Ɔkwan bi so no, gyidi ho hia paa na ama obi asɔ Onyankopɔn ani.
Gyidi bɛn na ɛsɔ Yehowa ani? Nneɛma abien na yɛde kyerɛ sɛ yɛwɔ Onyankopɔn mu gyidi. Nea edi kan ne sɛ, ɛsɛ sɛ ‘yegye di sɛ ɔwɔ hɔ.’ Sɛ yennye nni sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ a, ɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi asɔ n’ani? Kae sɛ ɛnyɛ yɛn ano nko na yɛde kyerɛ sɛ yɛwɔ gyidi efisɛ ahonhommɔne koraa gye di sɛ Yehowa wɔ hɔ. (Yakobo 2:19) Sɛ yɛwɔ gyidi sɛ Onyankopɔn te ase paa a, ɛsɛ sɛ ɛka yɛn ma yɛyɛ ɛho nnwuma; nea ɛkyerɛ ne sɛ yɛbɛbɔ bra a ɛsɔ n’ani.—Yakobo 2:20, 26.
Nea ɛto so abien, ɛsɛ sɛ ‘yegye di sɛ’ Onyankopɔn yɛ “katuafo.” Obi a ɔwɔ Onyankopɔn mu gyidi paa no, onim sɛ ɔbɔ bra a ɛsɔ n’ani a, ne brɛ renyɛ kwa. (1 Korintofo 15:58) Sɛ yennye nni sɛ Yehowa pɛ sɛ ɔma yɛn akatua na obetumi nso ama yɛn akatua a, yɛbɛyɛ dɛn atumi asɔ n’ani? (Yakobo 1:17; 1 Petro 5:7) Sɛ obi de hyɛ n’adwenem sɛ Onyankopɔn yɛ otirimɔdenfo a onnwen nnipa ho na nea yɛyɛ ma no biara nyɛ no fɛ a, ɛnde na onnim Onyankopɔn a Bible ka ne ho asɛm no.
Ɛhefo na Yehowa ma wɔn akatua? Paulo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ “wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ no.” Bible asekyerɛfo nhoma bi kyerɛkyerɛ mu sɛ Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “ani abere rehwehwɛ” no, ɛnkyerɛ obi a “ɔrekyin hwehwɛ” Onyankopɔn; nea ɛkyerɛ mmom ne obi a n’ani abere “resom” no. Nhoma foforo bi nso kyerɛ sɛ saa Hela asɛmfua no kyerɛ ahokeka ne nnamyɛ a obi de yɛ biribi. Enti, wɔn a gyidi ka wɔn ma Yehowa ho dɔ nti, wofi wɔn koma nyinaa mu de nsi som no no, wɔn na otua wɔn ka.—Mateo 22:37.
Sɛ yennye nni sɛ Yehowa pɛ sɛ ɔma yɛn akatua na obetumi nso ama yɛn akatua a, yɛbɛyɛ dɛn atumi asɔ n’ani?
Akatua bɛn na Yehowa de bɛma wɔn a wɔde gyidi som no? Ade a wahyɛ wɔn bɔ sɛ ɔde bɛma wɔn daakye no som bo paa, na ɛma yehu n’ayamye ne ne dɔ kɛse no. Ɔbɛma wɔn daa nkwa wɔ Paradise asase so. (Adiyisɛm 21:3, 4) Ɛnnɛ mpo, wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ Yehowa no nya nhyira pii. Wonya honhom kronkron no mmoa, na nyansa a ɛwɔ n’Asɛm mu no nso boa wɔn; ɛma wonya asetena a anigye ne akomatɔyam wom.—Dwom 144:15; Mateo 5:3.
Anokwa, Yehowa yɛ Onyankopɔn a n’ani sɔ n’asomfo a wɔde gyidi som no no paa. Wunhu sɛ ɛsɛ sɛ ɛno ma wobɛn no kɛse? Sɛ saa na ɛte a, adɛn nti na wunsua ne ho ade pii na wunhu sɛnea wubetumi anya gyidi a ɛbɛma Yehowa ahyira wo pii?
November Bible akenkan
Tito 1-3; Filemon 1-25; Hebrifo 1-13–Yakobo 1-5